Dagaalka la isku riiqmay ee Azerbaijan iyo Armenia ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan xabad… – Hagaag.com
Dagaalka la isku riiqmay ee Azerbaijan iyo Armenia ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan xabad…
Sida ay wararku sheegayaan waxa dhow xabad joojin in lagu dhawaaqay oo udhaxeysa Armenia iyo Azerbaijan oo dhexdhaxaadinaya Ruushka, kadib ku dhowaad labo todobaad oo duqeymo iyo dagaalo qaraar ay ka dhaceen gobolka ay ku muransan yihiin labada dhinac ee Karabakh.
“Waxaan aaminsanahay mabda’a ah in si nabad ah lagu dhameeyo khilaafka ka taagan Karabakh,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Armenia Jimcaha maanta, isaga oo intaa ku daray in dalkiisa uu diyaar u yahay in dib loo bilaabo geedi socodka siyaasadeed ee gobolka.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Armenia ayaa waxay ku dhawaaqday in wasiirrada arrimaha dibadda ee Armenia, Russia iyo Azerbaijan ay ku wada hadli doonaan magaalada Moscow si loo joojiyo dagaalka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu horaantii maanta kala hadlay hogaamiyaasha labada dal, wuxuuna ka codsaday inay wadahadal ku galaan Moscow kana shaqeeyaan xabad joojinta.
Kremlin-ka ayaa bayaan ku sheegay in “Oktoobar 9, wasiirrada arrimaha dibedda ee Azerbaijan iyo Armenia lagu casuumay inay booqdaan Moscow si ay wadatashi ula yeeshaan,” iyadoo ay dhexdhexaadinayso Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka.
Bayaanka ayaa cadeeyay in ujeedku yahay “in la joojiyo dagaalka” si la isku weydaarsado maxaabiista iyo meydadka askarta dhintay si gaar ah.
“Madaxweynaha Ruushka wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo dagaalka ka socda Nagorno Karabakh sababo bini’aadanimo, iyadoo ujeedku yahay in la isweydaarsado meydadka dadka dhintay iyo maxaabiista,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Wuxuu tilmaamay in Putin uu wadahadal la yeeshay Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo Ra’iisel wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan.
Markii dambe, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Ruushka waxay ku dhawaaqday in Armenia iyo Azerbaijan ay oggolaadeen inay ka qayb galaan wadatashiyada ku saabsan gobolka Karabakh ee lagu qabanayo caasimadda Ruushka, Moscow.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka, Maria Zakharova, ayaa ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay Jimcaha maanta, in wadatashiyada saddex-geesoodka ah maanta la qaban doono heer wasiirrada arrimaha dibedda. Waxay intaa ku dartay in u diyaar garowga kulanka seddex geesoodka uu durbaba ka socdo caasimada Moscow.
Dhinaca kale, Madaxtooyada Faransiiska waxay sheegtay in Armenia iyo Azerbaijan “ay u dhaqaaqeen xabad joojin” oo soo afjari doonta dagaalada ka socda Karabakh maanta ama berri.
Ilo ka tirsan Elysee ayaa yiri, “Waxaan u dhaqaaqeynaa xabad joojin midkood caawa ama berri, laakiin wali wey jilicsan tahay.”
Hadalkan ayaa yimid kadib markii Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu qadka taleefanka kula hadlay Ra’iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan habeenimadii khamiista iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev Jimcaha.
Dhinaca kale kooxda minsk loogu magac daray ayaa Jimcaha maanta la kulmi doona Wasiirka Arrimaha Dibadda Azerbaijan Jihon Permov, kooxdaasna waxaa ka mid ah Ruushka, Mareykanka iyo Faransiiska.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Azerbaijan ayaa caddeysay in “ujeeddada booqashadu ay tahay soo bandhigidda mowqifka Azerbaijan ee xallinta khilaafaadka.”
Paris waxay muujisay rajadeeda in kulamada Geneva iyo Moscow ay horseedi doonaan “furitaanka wadahadalada.”